toulouse-fampianarana | FI.MPI.MA. Frantsa
Taona fahatelo nisian’ny sehatra fiofanana an-kabary eto anivon’ny FI.MPI.MA. eto Toulouse ny taom-piofanana 2014-2015.
Ny fiofanana taom-pianarana 2014-2015, dia nanomboka tamin’ny asabotsy 11 oktobra 2014 ; atao in-droa asabotsy isam-bolana izany, maharitra adiny telo isaky ny fotoana (14 h -17 h), ao amin’ny :
Foyer IME Les Troènes, 31 rue Clausade, 31200 Toulouse.
Mifarana amin’ny faran’ny volana marsa 2015 izany. Hnala fanadinana ireo Mpiofana amin’ny 11 avrily 2015, ary avoaka ho Mpikabaryamin’io andro io ihanay izayafa-panadinana.
Mazoto sy mavitrika ny Mpiofana na misy aza ny mety ho fahasahiranana samihafa, indrindra amin’ny fotoana hanomanana ny fampiharana ohatra ; misy hatrany anefa ny fafanomezan-tanana eo amin’ny Mpampiofana sy ny Mpiofana ary eo amin’ny samy Mpiofana. Mirary fahombiazana ho azy ireo.
Sehatra Takalo :
Ny sokajy Takalo dia nanomboka niara-nikaroka sy niara-nidinika sy mifanakalo manodidina ny « kabary sy fomba malagasy », nanomboka ny 29 novambra 2014 teo. In-droa isam-bolana izany ary maharitra adiny roa isaky ny fotoana.
Natao tany an-tokatranon’ny Mpikambana izany tamboalohany, fa taty aoriana dia ao amin’ny Ecole la PRAIRIE, 1 bis rue des Néfliers, 31400 Toulous, no toerana fihaonana.
Mahatsiaro tretrika ireo Mpitakalo tonga mandray anjara, mahatsapa fa tena ilaina ny sehatra toy izao : tena misy fiaraha-mikaroka sy fifamantsiana tokoa. Ny Takalo moa dia mandavantaona. Ary anasana ny Mpikambana rehetra.